Omume kacha mma maka nhazi usoro nke Social Media Posts | Martech Zone
Hazi usoro mgbasa ozi gị ga-abụ akụkụ dị mkpa nke usoro mgbasa ozi mgbasa ozi gị, na enweghị isi ịsị, ọ nwere ọtụtụ uru. Ewezuga na ị gaghị eche echiche maka ikenye na ọtụtụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta ọtụtụ ugboro n'ụbọchị, ị ga-enwekwa usoro oge niile, na-eme atụmatụ oge na-echekwa oge, ma nwee oke nkesa-ahụike ebe ị nwere ike ịhazi tupu oge eruo.
Kama ịnọ na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta oge niile kwa ụbọchị, ịhazi oge na-azọpụta gị oge bara uru ị nwere ike iji maka ịzụlite azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ị maghị ebe ị ga - amalite, anyị ga - enye gị omume kacha mma maka ịhazi usoro mgbasa ozi gị nke ọma.
Biputere na Oge zuru oke
N'ihi algọridim na-agbanwe agbanwe mgbe niile na nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi dị iche iche, izipu oge zuru oke na akaụntụ mgbasa ozi gị dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọtụtụ ndị nwere ike lelee ihe ndị ị na-eme. Site na ọnụọgụ ndị ọrụ na-elekọta mmadụ na-arịwanye elu kwa ụbọchị, ntanetịime ozi mgbasa ozi na-emebeghị ngwa ngwa.
Nghọta na nchịkọta bụ otu ụzọ iji nyere gị aka ịmata oge kacha mma. Naanị lelee mgbe ndị na-ege gị ntị na-arụsi ọrụ ike na ịntanetị na biputere n'oge ahụ. N'ikwu ya, ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe nghọta doro anya karị, ịnwere ike iji usoro ịhazi usoro mgbasa ozi. Kindsdị ngwá ọrụ ndị a ga-enye gị oge ezipụ oge ọ bụla ebe ọ bụ na ha na-eji algorithm iji chọpụta oge kacha mma.
Na-agbasi mbọ ike ijikwa ihe karịrị otu akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta? Lelee ntuziaka a sara mbara otu esi ejikwa ọtụtụ akụkọ mgbasa ozi mmekọrịta ma hụ ihe omume kachasị mma.
Na-ebuli Ugboro Mgbasa Ozi Gị - Mara Ugboro Na-eziga
"Ugboro ole ka m kwesịrị biputere na akaụntụ Facebook / Twitter / Instagram m?" bụ otu n'ime ajụjụ a na-ajụkarị ma a bịa na atụmatụ ọdịnaya mmekọrịta mmadụ na ibe ya. O di nwute, enweghi onu ogugu ọla edo nke metutara uzo mgbasa ozi obula. E kwuwerị, ikpo okwu ọ bụla na-arụ ọrụ dị iche iche, mana ndị na-ege ntị dịkwa iche, yabụ na ha ga-enwe ihe dị iche iche achọrọ na atụmanya.
Otu ihe doro anya - izipu ọtụtụ oge agaghị eme ka ị nweta ma ọ bụ mee ka ndị na-ege gị ntị ngwa ngwa. N’aka ozo, akauntu gi nwere ike bia dika komputa, yabụ i nwere ike tufue ndi n’eso uzo.
Otu ụzọ iji chọpụta ugboro ole ị ga-eziga na ntanetị mgbasa ozi ọ bụla bụ site na ịnwale. Na Mọnde, ka anyị kwuo, ịnwere ike biputere otu ọkwa. E mesịa na Tuesday mụbaa nọmba ahụ gaa na post abụọ, na Wednesde ruo atọ, were gabazie. Izu na-abịa lelee nghọta gị ma ọ bụ nchịkọta ma tulee.
E nwere ụzọ dị mfe iji chọpụta ihe bụ ezigbo nọmba, nke ahụ nwekwara ike ịme site na usoro nhazi usoro mgbasa ozi. N'ikwu nke a, ka anyị nye gị ụfọdụ ndụmọdụ mgbe a bịara na oge mgbasa ozi gị.
Facebook, 1 - 2 ugboro kwa ụbọchị.
Twitter, 3 - 5 + ugboro kwa ụbọchị.
Instagram, 1 - 2 ugboro kwa ụbọchị.
LinkedIn, ugboro 2 kwa ụbọchị.
Pinterest - Oge 5 + kwa ụbọchị.
Google+, 1- ugboro 3 kwa ụbọchị.
Melite Posttọọ oge maka Evergreen Posts
Nọ na mgbe niile na mgbasa ozi ọha na eze abụghị ihe dị mfe; ka emechara, ị kwesịrị nọgidere na-enye ọdịnaya gị na-eso ụzọ dị iche iche nyiwe. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ọkwa ọ bụla kwesịrị bipụtara naanị otu oge. Kama nke ahụ, ụfọdụ posts na-adị mkpa ogologo oge ma na-amasị ndị na-ege gị ntị mgbe niile. Ibughari ọdịnaya mgbe ọ bụla bụ ụzọ dị mma iji nye ndị na-ege gị ntị ihe ha chọrọ ka ha na-enye usoro ịre ahịa ọdịnaya gị uru. Yabụ, kedu ka isi mara posts ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ na oge ole ị kwesịrị itinye ha?
A na-ahụta akwụkwọ akụkọ Evergreen dị ka posts ndị ahụ na-adịghị enwe mmetụta ọsọ ọsọ ma na-enye uru maka ogologo oge. Otu ụzọ ị ga-esi achọpụta nke n'ime posts gị na-adị ndụ mgbe niile bụ iji aka gị chọọ ha na ndepụta gị dabere na ọdịnaya na ọnụ ọgụgụ nke mmasị na nkọwa. Jiri aka hazie oge ọ bụla ka ị na-achọ oge kacha mma.
Wayzọ ọzọ bụ, ị chepụtara ya, site na iji ngwa nhazi oge. Offọdụ n'ime ngwaọrụ ndị a enweghị ike inyere gị aka ịchọta posts ndị ahụ nwere ọkacha mmasị, nkwupụta, na mbak, kamakwa hazie ha oge izizi zuru oke na ọtụtụ akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta.
Jiri Ngwaọrụ Ihazi Ihe Nlekọta
Mgbe anyị kwurịtara banyere ikenye na oge zuru oke, na-eme ka mgbasa ozi mgbasa ozi gị oge niile, yana ịhazi oge ọdịnaya gị, anyị kwuru na site na iji usoro ịhazi usoro mgbasa ozi, ọ bụghị naanị na ị ga-arụ ọrụ nke ọma, mana ị ga-echekwa oge bara uru. E nwere ọtụtụ usoro mgbasa ozi mgbasa ozi dị iche iche iji họrọ, Otú ọ dị, ọtụtụ na-enye otu atụmatụ abụọ ahụ. Nke mbu bu, o doro anya na ị na-ahazi ihe ị ga - eme ọ bụghị naanị na otu kamakwa n'ọtụtụ akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta. Ihe nke abuo bu nyocha a choro nke oma nke nwere ike inyere gi aka imata ndi na ege gi nti ma meziwanye usoro ihe gi.
N'oge a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ azụmahịa ọ bụla nke oge a enweghị ike ịrụ ọrụ na-enweghị ịnọ na opekata mpe otu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta. Nke a bụ ihe mere ịhazi usoro ihe ji dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe oge iji mee ihe ndị ọzọ iji bulie azụmaahịa gị kama ịnọ na ekwentị na-eziga oge niile. Ya mere, họrọ usoro ihe omume oge Amplifr ma lelee ka ndu gi si adi mfe karie mgbe ahia gi na eto!
Debanye aha maka Amplifr
Tags: ọrịreoge kacha mmaposts mgbe niileikenye ugborondokwa postsmgbasa ozi mgbasa oziusoro mgbasa ozi